Fampahalalana amin'ny antsipiriany momba ny lesoka CHECKDB "Ity indeks latabatra rafitra ity dia tsy azo averina ampiasaina intsony."
Home Products DataNumen SQL Recovery Lesoka CHECKDB: Tsy azo averina mamorona ity index Index ny latabatra rafitra ity.
Fampahalalana amin'ny antsipiriany momba ny lesoka CheckDB "Ity rafitra latabatra rafitra ity dia tsy azo averina alaina intsony."
Msg 2510, haavo 16, fanjakana 17, andalana 8
Hadisoana DBCC checkdb: Tsy azo averina aorina intsony ity index index ity.
Fanamboarana: Ny index tsy namboarina dia nanorina tamim-pahombiazana ho an'ny zavatra "sysidxstats" ao amin'ny tahiry "Error1".
Misy laharana 888 ao amin'ny pejy 16 ho an'ny object "sys.syscolpars".
Fanamboarana: Ny index Clustered dia nanorina tamim-pahombiazana ilay zavatra "sys.sysidxstats" ao amin'ny tahiry "Error1".
Fanamboarana: Ny pejy (1:40) dia nifampiraharaha tamin'ny ID ID 54, ID ID 1, ID fizarazarana 281474980249600, fizarana ID 281474980249600 (karazana angona In-row).
Fanamboarana: Nanamboatra an-tsakany sy an-davany ny index Nonclustered ho an'ny zavatra "sys.sysidxstats, nc" ao amin'ny database "Error1".
Hadisoana eo amin'ny latabatra: haorina indray ny ID ID 54, ny mari-panondro 1.
Object ID 54, index ID 1, partition ID 281474980249600, fizarana ID 281474980249600 (karazana Data angona): Pejy (1:40) dia tsy azo namboarina. Jereo ny lesoka hafa raha mila fanazavana.
Hadisoana latabatra: ID ID 54, ID ID 1, ID fizarazarana 281474980249600, fizarana ID 281474980249600 (karazana angona In-row), pejy (1:40). Tsy nahomby ny fitsapana (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)). Ny sanda dia 2057 sy -4.
Hadisoana latabatra: ID ID 54, ID ID 1, ID fizarazarana 281474980249600, fizarana ID 281474980249600 (karazana angona In-row). Pejy (1:40) dia tsy hita tao amin'ny scan na dia miresaka azy aza ny ray aman-dreniny (1: 163) sy ny teo aloha (1: 34). Zahao izay lesoka teo aloha.
Hadisoana latabatra: ID ID 54, ID ID 1, ID fizarazarana 281474980249600, fizarana ID 281474980249600 (karazana angona In-row). Pejy (1:164) dia tsy ampy fanovozan-kevitra avy amin'ny pejy teo aloha (1:40). Olana mifandray amin'ny rojo azo atao.
Hadisoana eo amin'ny latabatra: haorina indray ny ID ID 54, ny mari-panondro 2.
Misy laharana 130 ao amin'ny pejy 4 ho an'ny zavatra “sys.sysidxstats”.
Nahita lesoka fizarana 0 sy lesoka tsy fitoviana 4 tao amin'ny tabilao 'sys.sysidxstats' (object ID 54) ny CHECKDB.
Ny CHECKDB dia nametraka lesoka 0 ary ny lesoka 4 tsy tapaka amin'ny latabatra 'sys.sysidxstats' (object ID 54).
Nahita lesoka fizarana 0 sy lesoka tsy fitoviana 4 tao amin'ny database 'Error1' i CHECKDB.
SQL Server nahatsikaritra lesoka I / O miorina amin'ny tsy fitoviana mirindra: diso checkum (andrasana: 0x4bbecdad; tena izy: 0x0bbfc5ad). Nitranga izany nandritra ny famakiana pejy (1:40) tao amin'ny kaonty ID 39 tamin'ny offset 0x00000000050000 ao amin'ny rakitra 'C: Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL12.SQL2014MSSQLDATAError1.mdf '. Hafatra fanampiny ao amin'ny SQL Server log error na lozisialy momba ny hetsika dia mety hanome antsipiriany bebe kokoa. Ity dia fepetra goavambe diso izay mandrahona ny tsy fivadihan'ny tahiry ary tsy maintsy ahitsy eo noho eo. Fenoy ny fanaraha-maso tsy fitoviana tahiry (DBCC CHECKDB). Ity lesoka ity dia mety miteraka antony maro; raha mila fanazavana fanampiny, jereo SQL Server Boky an-tserasera.
Msg 2510 manondro ny index manokana latabatra rafitra dia tsy azo averina, izay ihany koa ny lesoka tsy tapaka.
Rehefa hitan'ny CHECKDB fa misy tsy fitoviana eo amin'ny atin'ny iray amin'ireo tabilao rafitra dia hitatitra ny hafatra diso izy Msg 2510 ary manandrama manamboatra ny lesoka. Raha tsy afaka manamboatra ny lesoka izy dia tsy mahomby ny fanarenana ary hitarika fahadisoana bebe kokoa, toy ny Msg 824.
Ohatra ny rakitra MDF simba izay hiteraka ny Msg 2510 fahadisoana:
SQL Server 2014 Hadisoana6.mdf Error6_fixed.mdf